“တစ်နှစ်တွင်း ကလေးအရွယ် နဲ့ အဟာရ´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » “တစ်နှစ်တွင်း ကလေးအရွယ် နဲ့ အဟာရ´´
“တစ်နှစ်တွင်း ကလေးအရွယ် နဲ့ အဟာရ´´
Posted by ခင်ခ on Mar 25, 2013 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 22 comments
မွေးစ မှ ၃ လအတွင်း – မိခင်နို့တိုက်ပါ။
၃ လ ကလေးငယ် – မိခင်နို့ နှင့် သောက်ရေသန့် နဲ့ သစ်သီးရည် ကျဲကျဲတိုက်နိုင်ပါသည်။ မိခင်နို့ မလုံလောင်ရင် နို့ဖျော်တိုက်ပေးလို့ ရပါတယ်၊ သတ်မှတ်တဲ့ အပျစ်အကျဲမျိုးဖြစ်သင့်ပါတယ်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ဆို ၂ အချိုး ၁ ၊ ၃ ပတ်အရွယ်ဆို ၃ အချိုး ၁ ဖြစ်ပါတယ်၊ ၂ လသားအရွယ်မှာ နိုအန်တတ်တာ သတိပြုပေးသင့်သလို ဖြည့်စွက်စာတွေ ကျွေးရင် ကလေးငယ်ကို မတ်မတ်ထိုင်စေတာ ပိုကောင်းပါတယ်၊
၄ လ ကလေးငယ် – မိခင်နို့ နှင့် သောက်ရေသန့်၊ သစ်သီးရည်၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ကျေအောင်ချေထားတဲ့ဌက်ပျောသီး။ ညဖည့်စွက်စာများ စမ်းစမ်းပြီးကျွေးသင့်ပေမယ် အတင်းအဓမ္မကျွေးခြင်းရှောင်သင့်ပါတယ်။
၅ လ ကလေးငယ် – မိခင်နို့ နှင့် ဆန်ပြုတ် မပျစ်မကျဲ( အသားနှင့်ပြုတ်လျှင် အသားမကျွေးရပါ) ရေသန့် ၊ သစ်သီးရည်၊ နို့၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ချေထားသော အားလူးပြုတ်၊ ငါးအသားချေပြီး၊ ဆန်မှုန့်ကော်ရည်၊ ငါးကြီးဆီ။
၆ လ ကလေးငယ် – နွားနို့ပိုတိုက်ပေးပါ၊ ရေသန့်၊ သစ်သီးရေ၊ ကိတ်မုန့် အာလူးပြုတ်၊ ပဲပြားပြုတ်၊ ငါးအသားပြုတ်ချေ၊ ဆန်မှုန့်ကော်၊ ငါးကြီးဆီ။ မမာမပျော့တဲ့ အစာတွေတိုးလို့ ကျွေးပေးပါ။
၇ လ ကလေးငယ် – ပုံမှန်အစာကျွေးခြင်း စတင်ကျင့်ပါ၊ ရေ၊ သစ်သီးရည်၊ ကိတ်မုန့်၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ အားလူးပြုတ်၊ ပဲပြားပြုတ်၊ ကလေးစားဘီစကွတ် များ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ဆန်ကော်မှုန့်၊ မုန်လာဥနီပြုတ်ကျေချေ၊ ၀က်အသည်း ပြုတ်ချေ၊ ငါးအသားပြုတ်ချေ။ မိခင်နို့အစား နွားနို့ပမာဏတိုးလို့ တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။
၉ လ ကလေးငယ် – အစားအသောက်မျိုးစုံ စကျွေးပေးပါ၊ အဟာရဖြစ်ဖို့ အသား ငါး တစ်မျိုးမျိုး ထဲ့ကျွေးပါ၊ သစ်သီးတုံးလေးတွေ၊ ပေါင်မုန့်၊ ကိတ် မုန့်၊ အာလူးပြုတ်၊ ပဲပြားပြုတ်၊ ၀က်အသည်း၊ ကြက်အသည်း၊ မိခင်နို့ဖြတ်ဖို့ ပြင်ဆင်သင့်မှု့ကာလပါ။ ဖြည့်စွက်အစာတွေကျွေးတဲ့နေရာမှာ တစ်မျိုးတည်း ကို သီးသန့်ကျွေးတာမျိုး မပြုလုပ်သင့်ပါ အဟာရမျှတအောင် ဗီတာမင်မျှ တစွာရရှိစေရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ လ ကလေးငယ် – ကလေးကိုယ်ဖာသာစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးပါ၊ မိခင်နို့ဖြတ်သင့်ပါပြီ၊ အစာကျေစေသောအစာများရွှေးချယ်ကျွေးပါ၊ အဆီ များ အီလွန် ငံလွန်သော အစာတွေရှောင်ပါ၊ဆန်ပြုတ် မပျစ်မကျဲ ပြုတ်ကျွေး၊ ကြက်ဥပြုတ် ပေါက်စီ(အသား လွတ်)၊ ပေါင်မုန့် တို့ကို ထမင်းနှပ်စဉ် ပေါင်းအိုး ထဲထဲ့ပေါင်းပြီး ကျွေးပါ၊ အသားတစ်မျိုးနဲ့ အသီးအရွက် ပဲ ပါဝင် အောင်ကျွေးပေးပါ။
၁၁ လ ကလေးငယ် – အစားစုံ ဆန်ပြုတ်၊ ပေါင်မုန့်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ထမင်း ပျော့ပျော့၊ ကြ်ဥပြုတ်၊ ငါးအသားပြုတ်၊ ၀က်သားပြုတ်၊ ဟင်းရွက်ပြုတ်၊ သစ်သီး၊ ကြေလွယ်သော ဟင်းရွက်ကြော် တို့ကျွေးပါ။
၁၂ လ ကလေးငယ် – အဟာရပြည့်စေမယ်အစာကျွေးနိုင်ပါပြီ၊ စပျစ်သီး ခြောက်၊ သစ်သီးယိုသန့်သန့်နဲ့ ပေါင်မုန့်၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ ထမင်းပျော့ နဲ့ ငါးအသားပြုတ် နယ်ကျွေး၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ ဟင်းရွက်ပြုတ်၊ သစ်သီး ကျွေးနိုင် ပြီး ရေများများ တိုက်ပေးပါ။ နွားနို့ကို တိုက်ကျွေးပေးပါ။ သစ်သီးများကို လှီးကျွေးပါ၊ အဓိက အစာကြေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
( မူရင်းရေးသူ – မောင်မောင်လှိုင်-အပ်စိုက်ကု)
ဖတ်ဖူးတဲ့ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေထဲက မျှဝေတာပါ။
ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ် … တွေအတွက် မှတ်သားသွားပါကြောင်း။ :hee:
ခရေပန်း သူ့ဆင်မြန်း ဆိုပြီး ဆက်ရေးရမလိုတောင် စဉ်စားမိသွားတယ်။
( နောက်မိတာပါနော် )
ဦးဆုံးအားပေးကာ ကွန်မန့်ပေးသူ KZ ကို ကျေးဇူးဗျို့။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာအကောင်းဆုံးလို့ ဆိုသမို့ ကြိုတင်ဖတ်ရှုလေ့လာသွားပါကြောင်းးး ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါကြောင်းး အဲ မေ့နေတာနော် သူ့ကိုလည်းဖတ်ခိုင်းအုံးမှ (သူငယ်ချင်းကိုပြောတာပါ)
မလွယ်ဘူး .. တကယ် …
ဇွတ်အတင်းကို လာဖက် .. အဲလေ .. ဖတ် ခိုင်းနေလို့
ခုတော့ ကြည့်ပါဦး ..
တကယ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး စာစုလေးဘဲ … ရှဲရှဲ …
အခုပဲ ဒီပို့စ်ကို ကော်ပီကူးပြီး ညီမလေးဆီပို့ပေးလိုက်တယ်…
ရွာထဲမှာ အကျိုးပြုပို့စ်တွေ အမြဲရေးတဲ့ ဆရာခကို ရွာမပြောင်းစေချင်တာ အမှန်ပါဗျာ…
မရှိမဖြစ် “ခ” လို့ ဆိုရင် လွန်တယ်မထင်ကြပါနဲ့…
ဟီ ဟိ… ဆရာခအညွှန်းအတိုင်းဆို မောင်ကျောက်လည်း ပိန်တော့မယ်ထင်ရဲ့…
မနက်ဖြန်ဆို ကျနော့်သမီးလေး ၁ လ ပြည့်တော့မယ်
ီနို့အန်တတ်တာ၊ နို့စို့ပြီး လေထိုးတာတွေ မဖြစ်အောင်
နို့တိုက်အစာကျွေးပြီးတိုင်း မတ်မတ်ချီပြီး လေထုတ်ပေးရပါတယ်ဗျ
သမီးကို လေသွားထုတ်ပေးလိုက်အုံးမယ်.. :harr:
ကိုရွာစားကျော်ရေ နို့အန်တဲ့အခါ ကလေးခန္ဓာကိုယ်လေးကို မတ်မတ်ထိုင်စေပြီး
ကလေးရဲ့နောက်ကျောလေးကို ဖြေးဖြေးလေး အုပ်ပေးရင် သက်သာပါလိမ့်မယ်။
နို့အန်ပြီးပြီးချင်း ရေတိုက်တာ နို့ဆက်တိုက်တာ ချက်ချင်းမလုပ်သင့်ပါဗျ။
အဖေတွေ. နို့စို့ပြီး..ကလေးလေမထိုးရအောင်.. ညကြီးသန်းခေါင်လည်းထ.. ချီ..ကျောလေးပုတ်. လေထုတ်ပေးရတာ..မပြောကြ..
မိခင်တွေက မွေးပြီးပြီးချင်း အဆင်မပြေသေးတာမို့ ဖခင်တွေ အနှီးဝင်လျှော်တာရတာလည်း ပြောပါအုံးလေ ဟီး
ဟုတ်တယ်သူကြီးရေ ကျနော့်သမီးက သူ့အမေအပေါ် အာဗြဲနဲ့ အော်ငိုနေလည်း ကျနော်ခေါ်ချော့ တိတ်သွားသဗျ.. သူ့ လေထုတ်ပေးနေကျ အဖေ့လက် သိသလားပဲ..
မိန်းမကလည်း သမီးက သူ့အဖေနဲ့မှ အဆင်ပြေတာတဲ့ (အထာ ထင်ပါရဲ့ ဟီး)
ဆီမရှိအဖေရှာ ချွေတာတော့အမိ………..´´ တဲ့။
သဘာဝတရားရဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ
အပြင်စီးပွားရှာရဲ့ တာဝန်က အဖေမှာတာဝန်ပိုရှိသလို
အိမ်တွင်းရေးလုပ်ကိုင် ချွေတာချက်ပြုတ် တာဝန်ကလည်း အမေမှာတာဝန်ရှိတယ်
ဆိုပြီး ပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းလေးဘဲ အခြေခံထားရေးဖွဲ့ကြလို့ပါ။
သဂျီးပြောသလို အဖေတွေ ကလေးထိန်းကြတာလည်းရှိတတ်သလို အမေတွေလည်း အလုပ်လုပ်စီးပွားရှာနေကြတာလည်း အခုတော့ရှိနေကြပါပြီ ဒါကတော့ မောင်ရောမယ်ရော ထမ်းထမ်းရွက်ရွက် မျှတစွာပြုတာမို့ ချစ်လို့လုပ်တယ်လို့မှတ်ပေါ့ဗျာ။
ကလေးတွေရဲ့.. ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းက.. အဟာရ.. အကျင့်..စရိုက်.. ဒါတွေကို.. ပြုစုပျိုထောင်ကြီးကြပ်ဖို့.. မြန်မာပြည်မှာပရိုတွေအများကြီးလိုပါတယ်.
ကျုပ်တို့တုံးကတော့.. အဖွားက.. ကလေး၁-၂နှစ်လောက်အထိ.. ဘာညာကွိကွ..အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့.. အသားဆို.. မထိရေးချ.. ပေးမထိ…
အိုဘယ့်.. မြန်မာပြည်..။ :buu:
သူကြီး ၁-၂ နှစ်လောက်ထိ အသားမစားခဲ့ရဘူး။
အနောက်တိုင်းတိုင်းပြည်တွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ မိန်းမတွေ ခွင့်ရက်ရှည်ယူပြီး ကိုယ့်ကလေးကိုယ်တိုင် နို့တိုက် စနစ်တကျ ပြုစု နေကြချိန် တွေမှာ
မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်မလုပ်တဲ့ မိန်းမ တွေ ကတောင် အားနေရက်နဲ့
ကိုယ့်ကလေးကို နာနီ ငှားပြီး နို့ဘူးတိုက်ခိုင်း နေတဲ့ ဓလေ့ဖြစ်လာ တာကို တော့ အတော်လေး စိတ်ပျက်မိတာ အမှန်ပါဘဲ။
ကိုယ့်ကလေးအတွက် နာနီ မှ မထားရင် လူအထင်သေးမှာ စိုး သတဲ့။
အဲဒီအယူအဆ အတွေးအခေါ် ကမှ ရှက်ဖို့ကောင်းတာမသိဘူး။
ကိုယ့်သားသမီး ကို ကိုယ့်လောက် ဘယ်သူကမှ ပိုပြီး ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ သိဖို့ ကောင်းတယ်။
အရီးရေ။ မြန်မာပြည်မှာက အကောင်းဆုံးအစေခံ ဆိုတဲ့ လျှပ်စစ်မီးက မမှန်လို့ပါ။ မီးမမှန်တော့ အ၀တ်လျှော်စက် သုံးမရ၊ ထမင်းအိုး တည်မရ၊ အော်တိုမက်တစ် ရေနွေးကြိုမရ။ မီးပူတိုက်လို့မရ။ အစစ ဒုက္ခတွေများလွန်းလို့ နာနီခေါ်ရတာပါ အရီးရေ။ ခလေးကို တစ်နေ့လုံး diaper ၀တ်ပေးထားဖို့ဆိုတာ ရာသီဥတုပူရင် မရပါဘူး။ အသားတွေ နီရဲလာရော။ ဒီတော့ အနှီးကို အထည် ၄၀ လောက် သုံးရပါတယ်။ ဒါတွေလျှော်ရ ဘယ်သက်သာမလဲ။ ခလေးတစ်ခါယူတာ လူကို ဘိုင်းဘိုင်းလဲတော့မတတ်ကို ပင်ပန်းတာ။ နေ့လည် ပူတဲ့အခါ အဲကွန်းမရ။ အဲကွန်းမရတော့ ခလေးက မခံနိုင်၊ ဒီတော့ ပုခက်တင်ရ၊ ပုခက်လွှဲရနဲ့ တကယ်မသက်သာလို့ပါ။
ပြုံးအိမ်မှာ အခုနာနီ မရှိတော့ဘူး။ နာနီက ၂လုံးတွေ ဖိထိုးပြီး ဒိုင်ကို သူထိုးသမျှ ပြုံးဆီကတောင်းလို့ပြောထားလို့ အိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်ရတယ်။
အဲ့သည်မှာလည်း နာနီ အနီကတ်ထိသကိုး.
Oppssss လို့ အော်လိုက်မိတယ်။
အပေါ်က မှင်စာလေး ပြောသလို မပြုံးကို ရည်ရွယ်ပြီး အနီကဒ် ပြတာ မဟုတ်တာ သိမှာပါနော်။
အိမ်မှာ တစ်ခြားလုပ်ဖို့ အဖော် တွေ အများကြီးရှိပြီး ကိုယ်က ဘာမှ လုပ်စရာမလို ..
ဒရိုင်ဘာမောင်းတဲ့ ကားကို ထိုင်စီးရပါရက် နဲ့ ကိုယ့်ကလေး ကို ကိုယ်တိုင်မချီ ဘဲ ကလေးချီဖို့ သီးသန့်နာနီ ခေါ်ထားတာ … တွေ
ကျွန်မ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ရ ကြားရ မသက်သာလို့ပါ။
မိခင် ဆိုတဲ့ တာဝန်က ကလေးကို မွေးထုတ် လိုက်ရုံဘဲ မှမဟုတ်တာ မဟုတ်လား။
မိခင် ဆိုတာမှာ ကလေး အတွက် အရေးကြီးတဲ့ တာဝန် တွေ ကို ကိုယ်တိုင် ထမ်းသင့်တာ မဟုတ်လား။
မိခင် ဆိုတာ ကလေး ရဲ့ ပင်မအမှီအခို ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင် နေသင့်တာ မဟုတ်လား။
ကမ္ဘာကို အုပ်စိုး မဲ့ ပုခက်လွှဲသောမိခင် လက် ဆိုတာ သူများ လက် ကို အားကိုးနေရတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး မဟုတ်လား။
မပြုံး လဲ မိခင်ကောင်း တစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။ :-)
အဟာရ က နေ နာနီ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်နေတာ ကိုခ ခွင့်လွှတ်တော်မူ။
ကလေး ၆ လ အထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးထဲပဲ(လုံလောက်ရင်)တိုက်
အခြား ဘာမှ မကျွေးမတိုက်ရ လို့ ဆိုပါတယ်..။
လူတွေကို ပုံစံခွက်ထဲကဆင်တူထွက်လာတဲ့ စက်ရုပ်တွေလို မထင်အပ်ဘူး…
လူတစ်ဦးချင်း ကလေးတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လိုအပ်မှု့ သင့်တော်မှု့တွေက
Babies Being Fed Solid Food Too Soon, New Study Finds
By Jennifer Lilonsky | First Posted: Mar 25, 2013 06:10 PM EDT
Tags Babies, solid food, health study
Forty percent of all mothers start feeding their babies solid food before they reach four months of age, according toastudy published in the journal Pediatrics.
And while the American Academy of Pediatrics, AAP, recommends that solid food be introduced intoababy’s diet starting at four months, research reveals that healthcare providers are telling mothers to start before the recommended age.
The AAP sets these recommendations because head and neck function necessary for ingesting solid foods safely are not fully developed until four months, the organization noted in the study—also citing the increased risk for developing chronic diseases like diabetes, obesity, eczema and celiac disease associated with early solid food introduction.
Kelley Scanlon, an epidemiologist with the Centers for Disease Control and Prevention and co-author of the study, explains what the findings reveal about the larger issue regarding the early introduction of solid food intoababy’s diet.
“Understanding parents’ motivations is important, becauseanumber of health problems are associated with the early introduction of solid food,” Scanlon told CBS affiliate station WLTX-TV.
“These findings don’t offerafull understanding why, but they give us some insight.”
Mothers who participated in the survey said that they started their child on solid food before four months for various reasons, including that it helped their baby to sleep longer through the night and that they simply felt their child was old enough to beginasolid food diet.
More than 1,300 mothers were surveyed as part of the study that investigated when and why they initiatedasolid food regimen for their child.
“We didn’t expect to see so many [give solids] before four months,” Scanlon said.
Scanlon added that the numbers from this study are significantly higher than those of previous studies that reported values ranging from 19 to 29 percent.
Doctors involved with the study asserted that breastfeeding should even be carried out until six months of age because ofawide array of health benefits likeareduced risk for developing diarrhea, diabetes, obesity and sudden infant death syndrome.
မွေးကင်းစကနေ အသက် ၁နှစ်ကြား ဦးနှောက်က ၂ဆခွဲကြီးထွားလာပါသတဲ့ …
အဆိုပါ ကာလတွေမှာ neuron connection တွေ အားကောင်းမောင်းသန်ချိတ်ဆက်မှု
အဲ ..ကျန်အရွယ်ပိုင်းတွေမှာတော့ ..အပြောင်းအလဲက ၁၀%လောက် စီသာ ရှိတာမို့
သဂျီး တနားပါလယ် … အဲ့အရွယ်မှာ အသားမစားခဲ့ရရှာဘု …
Age	Brain Weight – Male (g)	Brain Weight – Female (g)
Newborn	380	360
1 year	970	940
2 years	1,120	1,040
3 years	1,270	1,090
10-55 years	1,440-1,450	1,260-1,310
56-85 years	1,370-1,310	1,250-1,170
ဖောရှောတိုက်ရတယ်၊ ဒါမှဖောင်းကားပီး ခြစ်စရာဂျီးဖြစ်မှာ..
တူမလေး ၂ ယောက်တုန်းက ယောင်းမလုပ်တဲ့သူက ၂ မျိုးလုံး စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတယ် ..
အကြီးမလေးမှာ သက်ဦးကလေးဆိုတော့ စာအုပ်ထဲကအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာပြီး မိခင်နို့ကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့တယ် … ကလေးလေးက အကောင်သေးပြီး အစားချေးများတယ် .. ဒါပေမယ့် ဥာဏ်ရည်ကတော့ တော်တော်လေးထက်တာတွေ့ရတယ် ..
အငယ်မလေးအလှည့်မှာတော့ နို့မှုန့်ကို ဦးစားပေးပြီးတိုက်ခဲ့တယ် … ကလေးလေးက ၀တစ်တုတ်ခိုင်နေပြီး အစားချေးမများဘူး … ဒါပေမယ့် ဥာဏ်ရည်ပိုင်းမှာ နှေးကွေးတာတွေ့ရတယ် …